2017 – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Halkan ka dhageyso dhuuxa wareysiyada 14-04-1439 hijri
guuleed	 Dec 31, 2017 0
Dhuuxa wareysiyada waa barnaamij mug weyn leh oo habeen walba ka baxa warbaahinta islaamiga ah ee Al-furqaan, waxaa lagu soo qaataa wararkii ugu dambeeyay iyo wareysiyo muhim ah oo dhinacyo kala duwan lala yeesho Halkan ka dhageyso…
Halkan ka dhageyso warka duhurnimo 13-04-1439 hijri
Warka duhurnimo oo kamid ah sadexda war ee ka baxa idaacada Alfurqaan waxaa ku baxay qodobo kala duwan ee kala deg linkiga hoose. Halkan kala deg Warka Duhurnimo 31 12 2017.lite
DEG-DEG: Qarax xoogan oo ka dhacay magaalada Muqdisho.
cusmaan	 Dec 31, 2017 0
Wararka naga soo gaaraya magaalada caasimada ah ee Muqdisho ayaa sheegaya in qarax xoogan lala eegtay gaari ay wateen ciidamada Shisheeyaha ee duulaanka ku jooga Soomaaliya. Gaari nooca Hamarka ah oo ay saarnaayeen ciidamo katirsan kuwa…
Ciidamo katirsan Dowladda oo Weeraray Guriga Cabdi Qeybdiid.
Ciidamo katirsan dowladda federaalka ayaa weerar ku qaaday guri uu magaalada Muqdisho ka deganyahay Xillibaan Cabdi Cawaale Qeybdiid oo kamid ahaa dagaal oogayaashii soo maray taariikhda Soomaaliya. Ciidamada oo hubeysnaa ayaa gaari ay…
Halkan ka dhageyso dhuuxa wareysiyada 13-04-1439 hijri
guuleed	 Dec 30, 2017 0
Barnaamijka dhuuxa wareysiyada waxaa caawa lagu soo qaatay Cabdiqeybdiid oo la weeraray hoygiisa Muqdisho iyo qodobo kale oo xiiso leh. Halkan ka dhageyso dhuuxa wareysiyada 30 12 2017
Halkan Ka Dhageyso warka duhurnimo 12-04-1439 hijri
qeybta hoose waxaannu idinkugu soo gudbinaynaa warka duhurnimo oo lagu soo qaatay qodobo kala duwan. Halkan kala deg Warka Duhurnimo 30 12 2017.
Ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab oo la wareegay deegaan katirsan gobolka Gaarisa.
cusmaan	 Dec 30, 2017 0
Sida ay ku waramayaan wararka naga soo gaaraya gobolka NFD ee Kenya ay xooga ku heysato, ciidamo katirsan Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa howlgal ka fuliyay mid kamid ah deegaannada gobolka Gaarisa. Ciidamada Mujaahidiinta ayaa si…
Iyadoo dalka Yaman uu dhowr sanadood oo xiriir ah uu ka soconayo dagaallo u dhexeeya malleeshiyaadka Xuuthiyiinta oo taageero ka helaya Iiraan iyo maamulka Cabdi Rabbii haadi Mansuur, ayaa dagaalladaas waxay saameyn ku yeesheen dadka…
Shacabka dalka Iiraan ayaa sanado kadib wuxuu billaabay banaan baxyo waaweyn oo uu uga soo horjeedo siyaasadda maamulka dalka Iiraan ka dhisan. Maalintii shalay oo Jimco ahayd waxaa magaalooyin farabadan oo katirsan wadanka Iiraan ka…
Dhagayso Barnaamijka Dhacdooyinka Dunida Islaamka 11-04-1439
cusmaan	 Dec 29, 2017 0
Barnaamijka Dhacdooyinka Dunida Islaamka waa barnaamij todobaadle ah oo lagu soo bandhigo xaaladaha ka taagan caalamka Islaamka. Halkan ka dhagayso Barnaamijka Dhacdooyinka Dunida Islaamka 29-12-2017.lite